အပြည့်အဝ Alaskan Husky ခွေးမွေးမြူရေးလမ်းညွှန် & ရုပ်ပုံများ - Breeds
အဆိုပါ Malamute, Alaskan Husky, Samoyed နှင့် Akita, ဒီခွေးတွေအားလုံးမှာဘာတူညီချက်ရှိသလဲ။ မှားယွင်းစွာဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်း, အချိန်နှင့်အချိန်။
သငျသညျတစ်ခု Alaskan Husky နှင့်ပတ်သက်။ မှတ်ချက်စကားကိုနားထောငျပါလိမ့်မယ်, တစ်စုံတစ် ဦး ကသူက Alaskan Malamute တစ်ခုသို့မဟုတ် Siberian Husky ကြောင်းထောက်ပြလိမ့်မယ်
ကောင်းပြီ၊ နောက်ထပ်ကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးဖို့ Alaskan Huskies တွေရှိတယ်၊ သူတို့ကစင်ကြယ်တဲ့သားကောင်လို့မခေါ်ကြဘူး။
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် Kennel Club တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။
သငျသညျဤမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်, ထိရောက်သောစွတ်ဖားကွင်းခွေးကိုကောင်းစွာတတ်ကျွမ်းသင့်တယ်သော Alaskan Husky မှအဆုံးစွန်လမ်းညွှန်အတူတကွထားကြပြီ။
သဘာဝအားဖြင့်အသိဉာဏ်ရှိပြီးစံနမူနာယူထားသောမောင်းနှင်အားနှင့် ဒီ cheeky အခန်းတက်ကြွအိမ်ထောင်စုများအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောဖြည့်စွက်သည် အဘယ်သူသည်အလုပ်များစောင့်ရှောက်ရန်ကိုချစ်။
Alaskan Husky ခွေးမွေးမြူရေးလမ်းညွှန်
Alaskan Husky ခွေးပေါက်စ
Alaskan Husky စိတ်ထား
Alaskan Husky အရွယ်အစားနှင့်အသွင်အပြင်
လွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကအမေရိကသို့ရောက်ရှိခြင်း၊ စွတ်ဖားကိုခွေး Hardy လုပ်သားများဖြစ်ကြသည် Paleo-Eskimo လူမျိုးအတွက်။
ဆိုက်ဘေးရီးယားမှထွက်လာသောကြောင့် Alaskan Husky သည်ဘာကြောင့် Siberian Husky နှင့်ဆင်တူသနည်း။
သမိုင်းကဒီမျိုးနွယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး လေ့လာမှုများပြသခဲ့ကြသည် Siberian Huskies, Alaskan Huskies နှင့် Malamutes အားလုံးဟာနီးကပ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုပြသနေတယ်။
အလက်စကာပြည်နယ်သည်ဆယ်စုနှစ်များစွာ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည် crossbreeding သိုးထိန်း , Pointers နှင့် Salukis မျိုးရိုးဗီဇကွဲပြားမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖောက်၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့။
Alaskan Husky သည်စင်ကြယ်သောခွေးတစ်ကောင်မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမေရိကန်ဂေဟစနစ်ကလပ်အပါအဝင်မည်သည့်အဓိကခွေးဂေဟာရီကလပ်မှမွေးဖွားခြင်းအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဤခွေးတစ်ကောင်၏သွေးဆောင်မှုကိုခံရပါကသင်၏သုတေသနကိုပြုလုပ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် တစ် ဦး ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့မျိုးဆက်များ source ။
ထိုနည်းတူစွာပင်၊ သင်သည် Alaskan Husky ကယ်ဆယ်ရေးကိုလက်ခံရန်စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်၎င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်ရှိအမိုးအကာများရှိသည်။
Alaskan Husky အချက်အလက်
အလေးချိန် 35-80 ပေါင်
သက်တမ်း 10 - 15 နှစ်
အပူချိန် ကောင်းမွန်သော၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သော၊
အခြားအမည်များ Alaskan ခွေး
အိမ်ကိုခွေးကလေးတစ်ကောင်ယူလာဖို့သင်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်၊ သင်၏သုတေသနပြုရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ။
Alaskan Husky သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ခွေးပိုင်ရှင်များအတွက်မသင့်တော်ပါ။
ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်အချိန်နှင့်စိတ်ရှည်ဖို့လိုသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်အလွန်စွမ်းအင်ပြည့်ဝပြီးလေ့ကျင့်ခန်းများများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် (ခွေးခြေအိတ်ခွေးများကိုမှတ်မိကြသည်)!
Alaskan ခွေးကလေး၏အပြာရောင်မျက်လုံးများကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သို့သော်ပထမ ၁၂ ပတ်အပြီးတွင်သူတို့၏မျက်လုံးသည်အရောင်ကိုမှောင်မိုက်သောအရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လိမ်ယောက်ျားတွေဖြစ်ကြသည် တစ်ခုတည်းသောခွေးအချို့ အဘယ်သူသည်အပြာရောင်မျက်စိရှိသည်။
Alaskan အမှိုက်သရိုက်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၄-၆ ခွေးပေါက်စများဖြစ်သည်။
Alaskan Husky ခွေးပေါက်စသည်ပြိုင်ကားမျဉ်းများအမွေအနှစ်ရှိသောခွေးတစ်ကောင်အတွက်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ မှဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ အတွင်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကုန်ကျနိုင်သည်။
ဒါကတစ်နည်းနည်းနဲ့ပြသသွားတယ် သူတို့ရဲ့အားကစားမှာဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ ။
Alaskan Husky ခွေးတစ်ကောင်ကိုခွေးနှစ်ကောင် သုံး၍ မွေးနိုင်သည်။
Alaskan Malamute ဆိုက်ဘေးရီးယား Husky x
သင့်ရဲ့ furry သူငယ်ချင်း၊ အလယ်အလတ်မှအကြီးစားမျိုးနွယ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည် အပြည့်အဝရင့်ကျက်လိမ့်မည် ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသက် 12-18 လအကြား။
ဟောင်ဘို့မသိရ, ဤခွေးတစ်ကောင်လိမ့်မည် သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမင်းကိုပြောပြပါ ။ ရေခဲမုန့်ထရပ်ကားဖြတ်သန်းသွားသောအခါလူအများစုအတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောသင်သံပြိုင်တစ်ခုတောင်ရှိလိမ့်မည်။
သူတို့၏ Siberian Husky ဝမ်းကွဲကဲ့သို့ပင်သူတို့သည်တူးသူများဖြစ်နိုင်ပြီးတောက်ပသောလွတ်မြောက်ရေးအနုပညာရှင်များဖြစ်ကြသည်။
ရန်လိုသဘောထားတွေအတွက်မသိရ , Alaskan Husky များသောအားဖြင့်စူပါလူပေါင်းကောင်းသော pooch ဖြစ်ပါတယ်။
မကြီးဘူး စောင့်ရှောက်ခွေးပစ္စည်း သူတို့သည်ကာကွယ်ရန်မဟုတ်ဘဲပြေးရန်ရပ်တည်ခဲ့ကြသည်။
ဤ furry သူငယ်ချင်းများသည်စွမ်းအင်မြင့်ခွေးများဖြစ်သည်။
သူတို့ကပြေးရန်ရပ်ကြီးခဲ့သည် , အကွာအဝေးကျော်ထိရောက်စွာ။ ကြောင်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သူတို့ကကောင်းကောင်းတစ် ဦး တည်းကျန်ရစ်ခံရနိမိတ်လက္ခဏာ။
Alaskan Husky သည်ကြာရှည်စွာတစ်ကိုယ်တည်းနေခြင်းနှင့်မသင့်တော်သည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသူတို့၏လုံ့လလုံလောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သောဤအမှားနှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်မှုနှင့်ပျက်စီးခြင်းများကိုစောင့်ကြိုနေသည်။
လူမှုရေးအရကြောင့်သူတို့သည်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုသို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။
၎င်းတို့သည်ထိုမိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ပိုကြီးတဲ့, လုံ့လရှိသူခွေးအတွေ့အကြုံရှိသည်သောသူ ။
သူတို့ကအရမ်းအားကောင်းနေတယ်၊ ​​လေးလံသောကျော့ကွင်းများကိုဆွဲရန်အတွက်လုပ်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်သင့်ကလေးငယ်များကို leash ရဲ့အဆုံးမှာထားပါ။
Alaskan Husky အရွယ်အစားသည်အလယ်အလတ်နှင့်အကြီးစားဖြစ်သည်။
အလုပ်လိုင်းများသည်ပေါင် ၅၀ မှ ၈၀ အကြားရှိခွေးများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ 35-60 ပေါင်အကြားဘယ်နေရာမှာမဆိုအထိ။
အမျိုးသမီးများသည်အမြဲတမ်းယောက်ျားများထက်သေးငယ်သည် , သို့သော်ကြောင့်လိုင်းများအတွက်မတူကွဲပြားမှု၏အကွာအဝေးကြောင့်တိကျတဲ့အရွယ်အစားကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။
သင့်ရဲ့ Alaskan Husky ခွေးပေါက်စမိဘများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သင်၏ခွေးအရွယ်အပြည့်အရွယ်အစားကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Alaskan Husky ပုံမှန်စွတ်ဖားလိပ်ခွေးနဲ့တူလှပါတယ် ။
သူတို့ဟာမကြာခဏ Malamute နှင့် Siberian Husky နှင့်အတူရောထွေးနေကြသည်။
Alaskan Husky နှင့် Siberian Hisky နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါယခင်သည်ပိုမိုပါးလွှာပြီးကြွက်သားဖြစ်သင့်သည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့် Siberian Husky ထက်အရွယ်အစားကြီးပေမယ့်ပိုကြီးတဲ့တည်ဆောက်မှုရှိတယ် နှင့်ဝံပုလွေကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါ !
သူတို့အပြာရောင်မျက်လုံးများရှိနိုင်ပါသည်နေစဉ် သူတို့ရဲ့ဝမ်းကွဲစွတ်ဖားခွေးလိုပဲ သူတို့အညိုရောင် - Hazel မျက်စိရှိသည်ဖို့လေ့အဖြစ်က Alaskan အတွက်ဘုံမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီမျိုးဆက်ကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သောအလတ်စား - တိုသိပ်သည်းနှစ်ဆအင်္ကျီကိုရှိပါတယ် ဆီးနှင်းပြေးစဉ်အတွင်းဒြပ်စင်ကနေ ။
သူတို့ရဲ့နှစ်ဆအင်္ကျီမှာချောချောမွေ့မွေ့ကာကွယ်ထားသောဆံပင်များရှိပြီးအောက်ခံအင်္ကျီတစ်ထည်ရှိသည်။ ဤအစောင့်ဆံပင်များသည်ဆီးနှင်းနှင့်မိုးရွာခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး undercoat သည်အပူကိုထိန်းထားသည်။
အကယ်၍ ထိခိုက်နစ်နာသော undercoat ကိုသင်ကာကွယ်လိုပါကနေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်မှာမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ တစ် ဦး ထွန်ရွေးချယ်မှု၏ကိရိယာဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤသည်သော undercoat သက်ရောက်မှုအခမဲ့စောင့်ရှောက်မည် သင့်ရဲ့ခွေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်စည်းမျဉ်းကူညီ ။
သင်၏ Alaskan Husky ကိုရေအလွန်အကျွံမသောက်ပါနှင့်။ တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ရေအနည်းငယ်သောက်ပါကသူ၏အင်္ကျီကိုအစွန်အဖျားအခြေအနေတွင်ထားနိုင်သည်။ များလွန်းသောသူသည်မိမိအ ၀ တ်ကိုခြောက်သွေ့စေပြီးအရေပြားပြissuesနာအားလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အလုပ်များနေလိုသောတက်ကြွသောပိုင်ရှင်များအတွက်သင့်တော်သည် Alaskan Husky သည်အသားအရောင်ခွဲခြားခြင်း၊ သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသင်လုံးဝသေချာစွာသိရမည်။
လမ်းညွှန် ၁၆၀၀ ကယ်လိုရီ
သင့်ခွေးတစ်ကောင်ကိုအစာကျွေးဖို့အကောင်းဆုံးအစာကတော့မင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုပေးမယ့်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်ခြောက်သွေ့။ စိုစွတ်သည်၊
အာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာသည်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည် အားလုံးသင့်ရဲ့ခွေးရဲ့အာဟာရလိုအပ်ချက်များကို ; အထူးသပရိုတိန်းနှင့်အဆီ။
ခွေးအစားအစာတံဆိပ်များကိုကြည့်သည့်အခါပရိုတိန်းနှင့်အဆီပါဝင်မှုကိုရှာဖွေပါ။ အပြည့်အဝစိုက်ပျိုးသောအခါပရိုတိန်းသည်အနည်းဆုံးခြောက်ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပါဝင်သင့်သည် (အစာ၌မည်သည့်အစားအစာတွင်မဆိုပါဝင်သည့်အသားအရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေပါ) ။
kibble ကိုကျွေးသောခွေးများသည်စိုစွတ်သော (သို့) ကုန်ကြမ်းကျွေးသောပေါက်ပေါက်များထက်ရေပိုများကြလိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။
ခွေးတစ်ကောင်အနေဖြင့်အလွန်အကျွံကယ်လိုရီစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဝလွန်ခြင်းသည်အရိုးပြissuesနာများစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားသည့်လများအတွင်း။
မိနစ်များ မိနစ် ၆၀ ကျော်
ထိုအကြောင်းကြောင့်သူတို့သည်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခံနိုင်ရည်ရှိကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒသည်အခြားခွေးများနှင့်မတူပါ ) ။
ခွေးရူးပြန်ရောဂါများကဲ့သို့မျိုးပွားခြင်းသည်သူတို့၏ခြေထောက်များတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်သော (လွင့်မျောနေသော) အမျှင်များရှိပြီး Alaskan Husky တွင်နှေးကွေးသော (အေရိုးဗစ်) အမျှင်များရှိသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထီးကြီးဟာအမြန်ဖြစ်ဖို့ကြီးပြင်းလာတာကြောင့်တိုတောင်းတဲ့ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီး Alaskan Husky ဟာတည်ငြိမ်ပြီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုတယ်။
သူတို့သည်နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်မှုများလိုအပ်ပြီးတစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၆၀ အထက်ဖြစ်သည်။
သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်ပျင်းခြင်းနှင့်စိတ်သောကရောက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့လျှင် ၆-၈ နာရီနာရီအိမ်အပြင်ဘက်သို့ထွက်သွားပြီးတနင်္ဂနွေနေ့များအားလုံးအဆင်မပြေမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်လျှင်၊
နေ့ခင်းဘက်တွင်သင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်လျှင် (သို့) နေ့အလယ်ပိုင်းတွင်နာရီအနည်းငယ်နာရီကြာထုတ်ယူနိုင်ရန်အသိဥာဏ်ရှိသောခွေးကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူနိုင်သည်။
သင်၏လမ်းလျှောက်သူအားလမ်းလျှောက်ရန်ပြောရန်သတိရပါ။ ပြန်လည်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြာများသည်အမဲလိုက်ရှဥ့်များကိုထွက်လာသောအခါသူတို့၏ပိုင်ရှင်အားသူတို့၏ဂရုမစိုက်မှုကြောင့်ကျော်ကြားသည်!
ခွေးများကဲ့သို့ပင်သူတို့သည်အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကြသည် အခြေခံပြီးလေ့ကျင့်ရေးဆုချ နှင့်အပြုသဘောအားဖြည့်။
သူတို့ဟာအသိဉာဏ်ရှိသူ၊ သင်ကသာလှည့်လည်နေသောခွေးများကိုကြည့်ရှုရန်သာလိုအပ်သည် (သူတို့ကိုသင်ညွှန်ပြသောအချက်ပြမှုနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုပင်သင်ပေးနိုင်သည်) ။
သင့်ရဲ့ Alaskan Husky ခွေးကလေးငယ်ငယ်လေးကတည်းကစပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်ပါ။ သူတို့ရဲ့စိတ် ၀ င်စားမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့လုံလောက်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွေလုပ်ပါ၊
ဦး နှောက်ဂိမ်းတွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ Alaskans အများစုဟာကစားစရာမောင်းနှင်တဲ့အတွက်ကစားစရာတွေနဲ့ကစားဖို့ရွေးချယ်ပါ။
သူကပြောပါတယ်, ထို Alaskan Husky အချို့မျက်စိအခြေအနေများနှင့်အတူခံရပါဘူး တိုးတက်သောလွှာကျုံ့အပါအဝငျ အရာမျက်စိကွယ်စေနိုင်ပါတယ်။
Hypothyroidism လည်းဘုံဖြစ်ပါတယ် ဒီဖောက်ပေမယ့်မကြာခဏကောင်းစွာဆေးဝါးနှင့်အတူကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
မည်သည့်နှင့်အတူလိုပဲ ကြီးမားသောဖောက်ခွေး သူတို့က dysplastic တံတောင်ဆစ်နှင့်တင်ပါးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အန္တရာယ်မှာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်မိဘများစိစစ်အဲဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲလအတွင်းသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အာဟာရစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Alaskan Husky သည်စွမ်းအင်တန်ချိန်နှင့်အလတ်စားအရွယ်အစားမျိုးပွားမှုအတွေ့အကြုံရှိသောတက်ကြွသောမိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်!
အမြဲတမ်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုရှိခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုနေရာအသစ်များကိုရှာဖွေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်စေသည်။ သူတို့သည်စွမ်းအင်မြင့်မားပြီးတစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၆၀ အထက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုသည် (ဆိုလိုသည်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ ဦး နှောက်ဂိမ်းများသို့မဟုတ်ကစားခြင်းအချိန်) ။
တီ မိမိအဝံပုလွေကဲ့သို့ခွေးတစ်ကောင် , သူတို့ရဲ့ဝမ်းကွဲ Siberian Husky ထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးရပ်နှင့်ကျန်စွတ်ဖား - ခွေးနှင့်အတူရောထွေးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
သင်သိရန်လိုအပ်သည်မှာ၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောချစ်ခင်ကြင်နာမှုဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သည်များကိုသူတို့အားသင်ပေးနိုင်လျှင်သူတို့ကသင့်ကိုများစွာပေးလိမ့်မည်။ သင်၌ဤမျိုးနွယ်ရှိသလားဆိုတာကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
border collie သြစတေးလျသိုးထိန်းရောနှောအရွယ်အစား
pitbull နှင့် mastiff ခွေးပေါက်လေးများရောစပ်သည်